पूर्वाधार विकास बैंकले कहाँकहाँ लगानी गर्छ ? – Banking Khabar
सडकदेखि पुल निर्माणसम्मको काममा लगानी गर्नका लागि छिटै नै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना हुने भएको छ । बैंकका संचालनको अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अबको छ महिनाभित्रमा संचालनमा आइसक्ने इमर्जिङ नेपालका सीईओ डा. विनोद आत्रेयले बताएका छन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको स्थापनामा इमर्जिङ नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।